Vitamin D ကြွယ်ဝသောအစားအစာများ | OnDoctor
လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ သဘာဝအလျောက် ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ ဗီတာမင်ဓါတ်တစ်မျိုးရှိတာ သင်သိပါသလား ?
နေရောင်မထိတွေ့ရသူ၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းနှင့်ဓါတ်မတဲ့သူ၊ သားသတ်လွတ်စားသူတွေမှာ ချို့တဲ့တတ်တဲ့ ဓါတ်ဟာဘာဓါတ်ပါလဲ ?
လူ့အရေပြားဟာ နေရောင်ခြည်နဲ့ ထိတွေ့ရင် sunshine vitamin လို့ခေါ်တဲ့ အဆီမှာပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ Vitamin Dကို ထုတ်နိုင်ပါတယ်။
Vitamin D ကို ဗီတာမင်လို့ခေါ်ကြပေမယ့် အမှန်တကယ်မှာ ပရိုဟော်မုန်းတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်ဒီဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းများဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်၊ ကိုယ်အလေးချိန်နှင့် သွေးပေါင်ထိန်းညှိခြင်း၊ အရေပြား၊ ကြွက်သားနှင့် ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၊ အစာချေစနစ်တို့အပါအဝင် Calcium ကယ်လစီယမ် နဲ့ Phosphorus ဖော့စဖိတ်ဓါတ်စုပ်ယူမှုကို အားပေးတဲ့ အတွက်အရိုးအဆစ် နဲ့ သွားကြံ့ခိုင်မှုကို ရရှိစေပါတယ်။ ကိုယ်တွင်း calcium ပမာဏကို ထိန်းညှိပေးပြီး အရိုးပျော့ရောဂါ၊ အရိုးပွရောဂါတို့မှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ကလေးတွေမှာ Vitamin D ချို့တဲ့ရင် အရိုးပျော့ရောဂါ Rickets ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Vitamin D ကို အစားအသောက်ကနေလည်း ရရှိနိုင်ပြီး အောက်ပါအစားအစာတွေကတော့ ဗီတာမင်ဒီကြွယ်ဝတဲ့ အစားအသောက်တွေဖြစ်ပါတယ်
– ပြုပြင်ထားသော oat အုတ်ဂျုံ အစေ့အဆန်များ
– ကြက်ဥအနှစ် နို့နှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်းများ၊ ဒိန်ချဉ်၊ ထောပါတ်၊ ချိစ်စ၊ ဆိတ်နို့၊ ဒိန်ခဲ၊ ပဲနို့
– အဆီများသောငါး၊ ဆော်လမွန်ငါး၊ တူနာငါး၊ ဆာဒင်းငါး (sardines) ခေါ်သေတ္တာငါး၊ Cavier ကာဗီးယားငါးဥ၊ မက်ကရယ်ငါး
– ကြက်သားအဆီ၊ ကြက်ဆင်သား
– ဝက်နံရိုး၊ ဝက်သားကင်၊ ဝက်မိုးခိုသား၊ အမဲသားအသည်း
– ပင်လယ်စာ ကမာ၊ ပုဇွန်၊ ငါးရှဉ့်
– လိမ္မော်သီး၊ သင်္ဘောသီး၊ သရက်သီး၊ မက်မွန်သီး၊ ထောပါတ်သီး
– မုန်လာဥနီ၊ ကန်စွန်းဥ၊ ပန်းပွင့်စိမ်း၊ ရုံးပတီသီး၊ မှို၊ ပန်းငရုတ်ပွ
အထက်မှာပြောထားတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေအပြင် ကလေးတွေရဲ့အရိုးနှင့်သွား ကျန်းမာရေး၊ ကင်ဆာဖြစ်စေသော မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲမှု၊ အဆုတ်နဲ့နှလုံးကျန်းမာရေး တို့အပြင် အင်ဆူလင်ဟော်မုန်းပမာဏ ထိန်းညှိပေးပြီး ဆီးချိုရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှင့် ရောဂါကုသမှုတို့အတွက်ပါ အကျိုးရှိပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်သုတေသနလေ့လာချက်အချို့အရ Vitamin D ဟာ influenza virus ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိတယ်လို့တောင်ပြောကြတဲ့အတွက် ဆက်ပြီးသောသုတေသနလေ့လာမှုတွေ လုပ်နေကြပါတယ်။
နေရောင်ထဲထွက်ရတာနည်းသူတွေ၊ အခန်းထဲအနေများသူတွေ၊ sunblock အသုံးပြုမှုများသူတွေအနေနဲ့ Vitamin D ကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာတွေ လုံလောက်စွာစားသုံးသင့်တဲ့အပြင် လိုအပ်လို့ ဖြည့်စွက်ဆေးတွေကို သောက်သုံးရမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်နှင့် သင့်လျော်သောပမာဏကိုသာ သောက်သင့်ပါတယ်။ဒါကြောင့် လူကြီး၊ ကလေး၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များအနေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Vitamin D ကို နေ့စဉ်လိုအပ်မှုပမာဏပြည့်ဝအောင် နေထိုင်စားသောက်ဖို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်……
ရှေ့သို့	နောက်သို့ 1 of 210